Iindaba -Izizathu ezi-5 zokukhetha ukupakisha ityhubhu njengeyona nto ifanelekileyo
Kule mihla, ukupakisha okwahlukileyo kuye kwasetyenziswa kwizithambiso. Kwaye ukusetyenziswa kweetyhubhu zokucinezela kukhula kakhulu. Ukuthwala kunye nokuguquguquka kwenze ukuba ibe sisiqulatho esifanelekileyo ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo.
Konke okufuneka ukwenze kukuvula isiciko kunye nokuthamba, ukuthobela ukukhulula isiciko sebhotile okanye ukhuphe ngaphambi kokusetyenziswa ngakunye. Okwangoku, ilula kwaye iyaphatheka ukuphatha. Awudingi ukuthatha iibhotile ezinkulu / ezinzima okanye iingqayi.
Iingqayi zeglasi okanye iibhotile zinomtsalane, kodwa zibiza kakhulu. Bona kunye neepakethe zangaphandle zonke zongeza kwixabiso lemveliso.
Ngelixa iityhubhu zifikeleleka ukhetho. Ixabiso liphantsi kwaye umgangatho mkhulu kakhulu! Inomtsalane kuyilo lwakho olwahlukileyo.
Ngokungafaniyo neeplastiki okanye iibhotile zeglasi kunye neejagi, iityhubhu zilula kakhulu, zincinci, zigcina indawo kwaye ziyasebenza kwezothutho.
Ngenxa yokuba iityhubhu zinokuyilwa ngeendlela ezahlukeneyo kunye nobukhulu, ngenxa yoko iyahluka kwizicelo ezahlukeneyo. Ukusuka kwi-1ml ukuya kwi-500ml, ilungele i-Essence, i-cream cream, i-sunscreen okanye i-shampoo, ukulungiswa kweenwele kunye nayo yonke into ofuna ukuba nayo. Ke, ukwenza izinto ngendlela eyahlukileyo sesinye isibonelelo esiphambili sokusebenzisa ezi zitya zetyhubhu.
Ngenxa yokuphuculwa kwetekhnoloji, izixhobo ezisetyenziselwa ukwenza iityhubhu zeplastiki ziye zalungela indalo kule minyaka idlulileyo. Unokukhetha ezi phakheji njengokhetho olunobuhlobo.
Ibali elifutshane elifutshane, ezi zizibonelelo zeetyhubhu njengezikhongozeli zokuthambisa. Ukuba ungumvelisi wemveliso yezithambiso, sicebisa ukuba uqwalasele ukusebenzisa iityhubhu zokuthambisa. Kwaye ityhubhu yethu yokugcwalisa kunye nokutywina umatshini kunokukunceda kwimbonakalo.
Ke Nxibelelana noMatshini weHX ngoku, umthengisi omnye wokumisa umatshini wokupakisha kwaye masikuncede!